Etu esi enweta Ahịa na Ọdịnaya Social Curated | Martech Zone
Etu esi emefu mmanu ahia na mmekorita nke ndi mmadu
Satọdee, Nọvemba 15, 2014 Fraịdee, Nọvemba 14, 2014 Douglas Karr
Anyị anaghị anwa ịme ụmụaka anyị na anyị bụ isi iyi kachasị mma maka ịzụ ahịa na teknụzụ azụmaahịa na thentanetị. Anyị na ndị ọzọ na-emekọrịta mmekọrịta dị mma ma anyị na-akwalite ọtụtụ ndị ọrụ ibe anyị ndị derela ọdịnaya dị ịtụnanya karịa afọ. Anyị anaghị ele saịtị ọ bụla anya dị ka ndị na-asọmpi, anyị na-ele ha anya dị ka akụrụngwa maka ndị na-ege anyị ntị. Dika anyi no n’iru itolite iru anyi, a na-akwanyere anyi ugwu dika uru anyi na ewetara obodo anyi.
Anyị na-enweta ọkwa na ọkwa na isiokwu ndị nwere mmasị na ụbọchị niile ma anyị na-agụ ma nyochaa ha niile nke ọma. Mgbe enwere nnukwu infographic ịkekọrịta - anyị nọ na ya. Mgbe mmadu dere ihe di nma banyere mmasi, anyi na akwalite ya na ndi mmadu. Ọ bụrụhaala na anyị anọgide na-enye uru, anyị ga-anọgide na-eto eto anyị. Nbịaru ahụ na-ewetara anyị aha ọjọọ na - n'ikpeazụ - na-eduga n'aka ụlọ ọrụ ndị chọrọ enyemaka anyị. Yabụ, curated ọdịnaya bụ isi atụmatụ maka anyị.
Gịnị bụ ọdịnaya Onye Ọrụ nke Emepụtara? UGC
Ọ bụghị naanị B2B. Genemepụta uru maka ndị na-azụ ahịa bụ atụmatụ dị egwu. Ọbụna karịa ụlọ ọrụ na isiokwu ndị ọkachamara, ọdịnaya nke ndị ọrụ gị na -emepụta na-abụ ezigbo akụ iji kwalite ngwaahịa na ọrụ gị, gbasaa iru gị, nweta iru ọhụụ ma jigide ndị ahịa dị ukwuu. A maara ọdịnaya a dị ka ihe eji eme onye ọrụ, ma ọ bụ UGC.
Ndị ahịa nke oge a na -emepụta, na -ekere ma na-eri foto, vidiyo na ederede. Ọdịnaya mmadụ a abụghị naanị ewu ewu, ọ nwere mmetụta. More na ndị ọzọ, ndị ahịa na-echigharịkwuru oge na mmekọrịta mmadụ na ibe ha mgbe ha na-eme mkpebi. Tupu ịpị tinye na ụgbọ ibu, ha na-achọ stampụ nke ndị ọgbọ na ndị enyi ha. Omume a na-emepụta ohere dị ukwuu maka ụdị ịkwọ ụgbọala. Mana uzo si selfie gaa ire adighi adi ka ihe doro anya. Ọtụtụ ụdị na ndị na-ere ahịa ka enweghị usoro maka ịchụpụ azụmaahịa sitere na UGC.
Ọhụrụ a ozi sitere na OfferPop akọwaputara usoro maka ichikota na ichikota ihe ndi mmadu mejuputara n'ime ahia.
Tags: curated ọdịnayaenye onyinyeọdịnaya mmadụuGConye ọrụ mepụtara ọdịnaya
Gịnị bụ Email Nyocha? Kedu ka o si emetụta mgbapụta?